China Tablet PC Turnkey PCB Fivoriambe elektronika sy orinasa | KAISHENG PCB
PCBFuture dia nandray anjara tamin'ny famokarana PCB. Nandritra ny taona maro, nifantoka tamin'ny mpanjifa izahay ary nanolotra endrika PCB haingam-pandeha haingam-pandeha avo lenta avo lenta, mba handinihana ireo fepetra momba ny famokarana sy fanandramana tena izy.
Vy Coating: MAIMAIMPOANA maimaim-poana
Fitaovana fototra: Avo Tg 170 FR-4
Fitaovana metaly: maimaim-poana ny firaka HASL Fomba famokarana: SMT + Sosona: PCB 8 sosona
Fitaovana fototra: Haavo Tg 170 FR-4 Fanamarinana: SGS, ISO, RoHS MOQ: Tsy misy MOQ
Karazana solder: mifanaraka amin'ny RoHS Serivisy tokana: PCB Manufacturing And Turnkey PCB Assembly Fitsapana: Fitsapana 100% AOI / X-ray / Visual
Teny lakile: Assembly PCB, PCB fabrication, Requirements, PCB Assembly Manufacturer, Cheap PCB Assembly, Printed Circuit Board Assembly Company
Ao amin'ny PCBFuture, miezaka izahay hiara-hiasa amin'ireo mpanjifanay. Manomboka amin'ny prototyping ka hatramin'ny famokarana feno dia fanitarana ny fahafahan'ny mpanjifa izahay. Manatsara hatrany ny fandaharanay sy ny fomba fanaovanay kalitao izahay mba hihaonana na hihoarana ny takian'ny mpanjifanay hatrany.
PCBFuture dia manolo-tena amin'ny fampiharana rafitra fitantanana kalitao hahafahan'ny vokatra sy ny serivisy mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifanay.
Fa maninona no serivisintsika PCB Assembly sy PCB?
Ny politikanay momba ny kalitao dia ny fanomezana vokatra sy serivisy kalitao hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa sy antenainy amin'ny vidiny, kalitao, fandefasana ara-potoana ary serivisy.
Manohana teny nalaina an-tserasera 24 ora sy serivisy maika 12 ora izahay ho an'ny prototype PCB. Manokana amin'ny famokarana PCB tokana, PCB misy lafiny roa, PCB multilayer, PCB aluminium ary PCB malefaka.
Izahay dia manolo-tena hihaona amin'ny filan'ny mpanjifanay amin'ny indostria samihafa amin'ny kalitao, ny fandefasana, ny fahombiazan'ny vidiny ary ny vahaolana PCB. Manomeza tolotra manokana namboarina ihany koa. Farany, PCBFuture ampanjifaina PCB mifanaraka amin'ny teti-bolanao mba hamonjy ny fotoana handresenao ny tsena.
PCB misy lafiny roa
Avadiho haingana ny fivorian'ny PCB
Fampiharana amin'ireo birao fanaovana pirinty vita printy:
1. Fampiharana jiro
Ny LED miaraka amin'ny PCB miorina amin'ny alimina dia tena irina amin'ny fampiharana sy indostria maro.
2. Elektronika ho an'ny mpanjifa
Ny fitaovana elektronika ho an'ny mpanjifa no fitaovana ampiasaintsika isan'andro, toy ny smartphone na solosaina. Na ny maodelin'ny vata fampangatsiahana vaovao aza dia matetika misy singa elektronika.
3. Fitaovana fitsaboana
Ho an'ny rafi-pitsaboana dia ilaina ny fonosana kely hahafeno ny fepetra takiana amin'ny efijery na ny efitranon'ny vonjy taitra. Noho izany, ny PCB ara-pahasalamana dia mazàna ho PCB mifampitohy avo lenta, izay antsoina koa hoe HDI PCB. Ny PCB ara-pahasalamana dia azo atao miaraka amin'ny fitaovana mora miorina ihany koa, mamela ny PCB hikorisa mandritra ny fampiasana, izay tena ilaina amin'ny fitaovana fitsaboana anatiny sy ivelany.
4. Fampiharana indostrialy
5. Fampiharana mandeha ho azy
Tandremo amin'ny fananganana tabilao mihodina matetika:
1. Ny fanaraha-maso impedance dia henjana, ny fanaraha-maso ny sakany voafetra dia tena hentitra, ary ny fandeferana ankapobeny dia manodidina ny 2%.
2. Noho ny fampiasana takelaka manokana dia tsy avo ny fikitikitika ny fametrahana varahina PTH. Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana fitsaboana plastika dia takiana mba hanodinana ny lavaka sy ny tampon'ny tany mba hampitomboana ny firaiketan'ilay ranomainty PTH sy ny ranomainty masaka solder.
3. Aza kosehina ny takelaka alohan'ny fanoherana ny welding, raha tsy izany dia ho tena mahantra ny adhesion, ary azo vonoina amin'ny vovoka micro-corrosive ihany.
4. Ny ankamaroan'ny ravina dia fitaovana PTFE. Hisy marokoroko marobe rehefa noforonin'ireo mpikapa fikosoham-bary tsotra izy ireo, izay mila mpikapa fikosoham-bary manokana.
5. Ny takelaka boribory avo lenta dia tabilao manokana misy hafanana elektromagnetika avo lenta. Amin'ny ankapobeny, ny refy matetika dia azo faritana ho matetika mihoatra ny 1 GHz.
Ny toetra ara-batana, ny marina ary ny masontsivana teknika dia mitaky be. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny rafitra fanoherana ny fifandonana amin'ny fiara, ny rafitra zanabolana, ny rafitra radio ary ny sehatra hafa.
Teo aloha: Smart TV Box Pcb Assembly Main
Manaraka: Turnkey Cheap Pcb Assembly
Fivoriambe elektronika Pcb
Fivoriambe Pcb elektronika